बाइबलमा भएको सुसमाचार साँच्चै परमेश्वरबाट आएको हो? | सुसमाचार
१. बाइबलको लेखक को हो?
मानिसहरू सधैंभरि पृथ्वीमा बाँच्नेछन्‌ भन्ने सुसमाचार बाइबलमा लेखिएको छ। (भजन ३७:२९) बाइबल ६६ वटा स-साना किताब मिलेर बनेको छ। बाइबल लेख्न परमेश्वरले करिब ४० जना विश्वासी पुरुषहरू प्रयोग गर्नुभयो। सुरुका पाँच किताब मोशा नाम गरेका व्यक्तिले लगभग ३,५०० वर्षअघि लेखे। अन्तिम किताब येशूका चेला यूहन्नाले १,९०० वर्षभन्दा अघि लेखे। बाइबल लेखकहरूले बाइबलमा कसका विचारहरू लेखे? परमेश्वरले बाइबल लेखकहरूलाई पवित्र शक्तिद्वारा आफ्नो कुरा बताउनुभयो। (२ शमूएल २३:२) तिनीहरूले बाइबलमा आफ्नो विचार होइन परमेश्वरको विचार लेखे। त्यसैले बाइबलको मूल-लेखक यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ।—२ तिमोथी ३:१६; २ पत्रुस १:२०, २१ पढ्नुहोस्।
२. बाइबल परमेश्वरले दिनुभएको हो भनेर हामी कसरी पक्का हुन सक्छौं?
बाइबल परमेश्वरबाट आएको हो भनेर हामीलाई थाह छ किनभने यसमा थुप्रै विस्तृत भविष्यवाणी गरिएका छन्‌ र ती सही साबित भएका छन्‌। कुनै पनि मानिससँग त्यस्तो क्षमता छैन। (यहोशू २३:१४) सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरले मात्र मानवजातिको भविष्य ठीकसित थाह पाउन सक्नुहुन्छ।—यशैया ४२:९; ४६:१० पढ्नुहोस्।
बाइबल परमेश्वरले दिनुभएको हुनाले यो बेजोड हुनुपर्छ भनेर हामी आशा गर्छौं। साँच्चै नै बाइबल बेजोड छ पनि। बाइबल सयौं भाषामा करोडौं प्रति वितरण भएको छ। बाइबल पुरानो पुस्तक भए तापनि यो प्रमाणित विज्ञानसँग मेल खान्छ। यसका ४० जना लेखकहरूको विचार आपसमा बाझिएको छैन। * त्यसबाहेक बाइबलमा परमेश्वरको प्रेमको प्रमाण स्पष्टै पाउन सकिन्छ र यसमा मानिसको जीवनलाई सुधार्ने क्षमता अझै पनि छ। यी तथ्यले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने कुरामा लाखौं मानिसहरूलाई विश्वस्त बनाएको छ।—१ थिस्सलोनिकी २:१३ पढ्नुहोस्।
३. बाइबलमा के छ?
परमेश्वरले मानिसजातिको लागि एउटा मायालु उद्देश्य राख्नुभएको छ भन्ने सुसमाचार बाइबलको एउटा मुख्य विषय हो। मानव इतिहासको सुरुमा पृथ्वीमा भएको सुन्दर बगैंचामा जीवन बिताउने मानिसको सुअवसर कसरी गुम्यो र अन्तमा पृथ्वी कसरी फेरि सुन्दर बगैंचा हुनेछ भनेर धर्मशास्त्रमा बताइएको छ।—प्रकाश २१:४, ५ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरको वचनमा विभिन्न नियम, सिद्धान्त र सल्लाह पाइन्छ। साथै परमेश्वरले मानिसजातिसित कस्तो व्यवहार गर्नुभयो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। ती विवरणबाट परमेश्वरको व्यक्तित्वबारे हामी सिक्न सक्छौं। त्यसकारण परमेश्वरलाई चिन्न बाइबलले तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ। तपाईं कसरी परमेश्वरको मित्र हुन सक्नुहुन्छ भनेर पनि बाइबल बताउँछ।—भजन १९:७, ११; याकूब २:२३; ४:८ पढ्नुहोस्।
४. बाइबलको कुरा तपाईं कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ?
येशूले जुन तरिकामा मानिसहरूलाई बाइबलबारे बुझाउनुभएको थियो, त्यस्तै तरिकामा यस पुस्तिकाले पनि तपाईंलाई बाइबलको कुरा बुझ्न मदत गर्नेछ। येशूले एकपछि अर्को बाइबल पद उल्लेख गर्दै “धर्मशास्त्रको अर्थ” बुझाइदिनुभयो।—लूका २४:२७, ४५ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरबाट पाइने सुसमाचार जत्तिको मनमोहक कुरा अरू छैन। तर कोही-कोही यसमा चासै दिंदैनन्‌ अनि अरू कतिपय भने यसबारे कुरा गर्दा रिसाउँछन्‌ पनि। तर निराश नहुनुहोस्। परमेश्वरलाई चिनेपछि मात्र तपाईंले अनन्त जीवनको आशा पाउन सक्नुहुन्छ।—यूहन्ना १७:३ पढ्नुहोस्।
^ अनु.7सबैका लागि उपयोगी किताब शीर्षकको पुस्तिका हेर्नुहोस्।